Posted by Tranquillus | Sep 24, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Dadka badankood waxay ka baqaan dhaleeceynta. Sababta Si fudud maxaa yeelay marwalba waxaa loo arkaa inay tahay cay ama qiimo dhac. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa kabaal loogu talagalay horumarka haddii ay tahay mid wax dhisaysa. Weli waa inaad taqaanaa sida loo qaabeeyo, loo diro loona soo dhoweeyo.
Waa maxay dhaliil wax dhisaysa?
Dhaleeceynta wax dhistaa waa farshaxan. Waa inay u oggolaataa qofka ay khusayso inuu aqoonsado dhibcihiisa daciifka ah iyo dulduleelada ay tahay inuu buuxiyo qodobbada kala duwan. Tani ma aha kiiska dib u eegista xun. Tani waxay u egtahay inay abuurto dareen dambi iyo jahwareer. Intaa waxaa dheer, waxay si dhab ah u baabi'isaa kalsoonida.
Sida laga soo xigtay khabiirada xiriirka dadka dhexdooda, waa inaad dhaleeceyntaa markii loo baahdo, gaar ahaan markaad qof ku qadarinaysid. Laakiin waa in si fiican loo muujiyo. Tani waxay ka caawisaa qofka inuu horumar ku sameeyo nolosha. Laakiin marxaladaha oo dhan, waa inaad mar walba xusuusataa inaad adigu doorato ereyadaada ka hor intaadan ku hadlin, iyo marka ay muhiim tahay.
Sidee loo soo saaraa dhaliil wax dhisaysa?
Cabsi laga qabo falcelinta qofka ay khusayso, dadka badankiisu way ka caga jiidaan inay soo saaraan dhaliil. Sidee ayay u qaadan doontaa hadalka? Ma laga xumaan karaa? Mararka qaarkood xitaa waxaan la yaabnaa mustaqbalka xiriirka. Dabcan, waa wax aan macquul ahayn in la ogaado sida qofku u dhaqmi doono iyo ka sokow, waxba lama beddeli karo.
Dhanka kale, mid ayaa keeni kara daryeel dheeraad ah habka loo habeeyo iyo soo saarista dhaleeceynta. Waa in sidoo kale loo sameeyo si loo aqbalo. Sidaa darteed waxaa jira xeerar loo tixgelinayo in la gaaro hadafkaas.
Xulo waqtiga ugu habboon
Waxaa si xooggan looga niyadjabay in ay ka jawaab celiso saameynta cadho. Haddii kale, waxaanu leenahay halista ah inaan bilowno ereyo waxyeello leh iyo kuwa niyadjabinta. Si looga fogaado qaladkan qaska ah ee burburin kara xidhiidhka, waa inaad sugto duufaanka si aad u degtid inta aadan waxba sheegin. Intaa waxaa dheer, mid ayaa xanaaq badan ku xanaaqi kara siyaabo badan.
Haddii ay lagama maarmaan tahay in laga jawaabo mustaqbalka dhow, waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo dirista faallooyinka qofka lala beegsaday. Si kale haddii loo dhigo, waa in aan lagu dhaleeceeynin, laakiin halkii lagu soo koobi lahaa.
Had iyo jeer ku tiirsanow xaqiiqda
Qaabka labaad ee suulka ayaa ah inaanu dhaleeceynin dabeecadiisa. Waxay ku xiran tahay in lagu xukumo. Tusaale ahaan, isaga oo u sheegaya in uu la yaabay haddii uu ilaaway ballan muhiim ah ma aha wax cay ah. Waa inaan mar walba ku saleynaa xaqiiqooyinka. Taasi waa sababta aan u xusuusto xaaladaha, meesha, taariikhda iyo waqtiga.
Diyaarinta ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Nidaamka dhaleeceynta ah waa in la diyaariyaa ka hor, isagoo daryeelaya inuu bixiyo tusaalooyin cadcad. Intaa waxaa dheer, waa lagama maarmaan in la diyaariyo kulanka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ha ka xishoonin inaad ku dhaqanto si aad u hesho raadadka saxda ah ee aad ku qaadaneyso. Waa inaan mar walba maskaxda ku heynaa in aanu hayno fariin gudbin ah.
Soo jeedin xal
Markaan sameyno dhaliil wax dhiseysa, waa inaan aqbalno in qofka ay quseyso uu isna leeyahay hadal. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad u furnaataa dooda oo aad si xor ah u muujisaa nafteeda. Thanks to isweydaarsigan, waxaan ku dhiirrigelinaynaa kan kale inuu si habboon u qiimeeyo xaaladda.
Tixgelintiisa oo tixgelin la siiyaana waa muhiim. Isla mar ahaantaana, waa inaad ka caawisaa inuu wax hagaajiyo adoo soo jeedinaya xalkaaga. Mar labaad, waa inaan xaqiiqda ku sii jirnaa oo aan qaadannaa aragti wanaagsan. Marka halkii aad ka oran lahayd "waa inaad haysataa", waxaa fiican inaad isticmaasho "waad awoodi kartaa".
READ Sidee loo dhegeystaa si waxtar leh?
Samaynta naqshad wax dhisid ah waxaa loola jeedaa in la muujiyo xoogagga kale ee xoogga leh si loo dhiiri geliyo loona ilaaliyo isku kalsoonidooda. Markaad ka warqabto awoodda qofku, qofka daneynaya wuxuu ku guuleystaa dhiirigelinta iyo is-kalsoonida. Waxay xitaa ka gudbin kartaa lafteeda.
Sidoo kale, inaad xasuusato waxyaabaha wanaagsan ee qofku qabtay waa dariiqa ugu wanaagsan ee lagula macaamilo xanaaqaaga. Waad iloobi doontaa niyad jabkaaga, maxaa yeelay waxaad aaminsan tahay inuu isbadal sameyn karo oo dhibaatada xallin karo. Digniin! Wareysiga oo dhan, waa lagama maarmaan in daacad la ahaado.
Ujeedada leh naqshad wax dhis ah waa in ay riixdo qofka daneeynaya in uu horumariyo horumarkooda mustaqbalka fog. Si kale haddii loo dhigo, dhexgalkaaga ma joojinayo wareysiga kowaad. Waa inaan raacnaa.
Tan macnaheedu waa inaad sii jirtid haddii uu u baahan yahay caawimaad ama haddii uu mar kale dhibaato la kulmo. Sida iska cad, waa suurtagal in la gaaro isaga haddii uusan isbeddeleynin dhaqankiisa.
Markaad la hadashid qofka kula hadlaya, waxaa muhiim ah inaad is dajiso. Waa inaan sidoo kale ka baxnaa dareennada. Maskaxda ku hay in ujeedadu tahay inaanan cabsanin, laakiin si aad u hesho hab lagu hagaajiyo xaaladda.
Sidee loo helaa dhaliil wax dhisaysa?
Haddii aad tahay qofka ku jira booska aad ku heli karto dhaliil, maxaad sameysaa? Sida iska cad, tani ma sahlana. Si kastaba ha noqotee, waa inaad u ogolaataa wadahaaga inuu hadlo. Marna waa inaadan ka dhex galin. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad leedahay xirfad dhegeysi wanaagsan.
Waxa kale oo fiican in aan la yareeyo dhibaatada. Waa inaan helnaa dhaleeceynta la soo saaray iyo dhammaan dareenka la socda. Ma jiraan wax su'aal ah oo naftaada u sabab ah. Waa in loo caddeeyaa qofka aad wada hadlaysaan in aad runtii rabto inaad fahamto ereyadiisa. Haddii ay lagama maarmaan tahay, ha ka waaban inaad weydiiso su'aalo. Xaqiiqdii, waxaad gebi ahaan weydiisan kartaa xaqiiqooyin gaar ah.
Haddii dareen diidmo ahi kugu yimaado, iska ilaali isla markiiba. Sida ugu fiican waa in dib loo soo celiyo oo lagu falanqeeyo waxyaabaha naqdiga ah ee la helay. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad si fiican u fahamtid fariinta qofka aad wada hadlaysaan. Taasi waa markii aad siin kartid fikraddaada.
Isla mar ahaantaana, ka feker inaad soo jeedinayso hagis hagaajin ah oo ku saleysan codsigaaga. Haddii aad sidan sameyso, waxaad hagaajin kartaa waxqabadkaaga iyo sidoo kale hagaajinta xiriirkaaga qoyskaaga, asxaabtaada iyo kormeerayaasha.
Si loo dhameeystiro, dhaleeceyn nuxurkiisu waa lagama maarmaan. Waa inay u ogolaataa qofka daneeynaya in uu isku kalsoonaado naftiisa oo uu helo habka saxda ah ee lagu hagaajin karo waxqabadkooda. Mar labaad, ereyada la doortay waa in si taxadar leh loo doortaa. Dhibaatada waa in ay soo celisaa xaqiiqooyinka, ka dhaadhicisaa awooda qofka la beegsanayo oo ay ku jirto habka hagaajinta. Haddii aad hesho naqshad waxtar leh, waa inaad sidoo kale barataa inaad hesho. Waa in aynaan la qaadin. Waa inaad dhageysataa ereygaaga iyo falanqaynta erayada. Waa in aad xusuusatid in awoodda aad u leedahay inaad soo bandhigto naqshad waxtar leh ama aad ku heshid haddii ay dhacdo khaladaadkaaga qaybtaada, iyo tayada sii xoojin doonta.
Dhaleecaynta dhismaha ayaa soo saari doonta, hela. Sebtembar 18th, 2018Tranquillus
horeCadaadiska, dib u noqo dibna u sheeg shucuurtaada siyaabo waxtar leh.
socdaSidee si dhakhso ah u hagaajineysaa hingaadka dukumintigaaga, helitaanka software antidote.